CAJIIB: "Kani Wuu Innaga Soo Horjeedaaye Kubadda Ha Siinin" - Karim Benzema Oo Xiddig Real Madrid U Diiday In Kubadda Loo Dhiibo Kulankii Xalay - Gool24.Net
CAJIIB: “Kani Wuu Innaga Soo Horjeedaaye Kubadda Ha Siinin” – Karim Benzema Oo Xiddig Real Madrid U Diiday In Kubadda Loo Dhiibo Kulankii Xalay
October 28, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Real Madrid ayaa si adag ku bilaabatay Champions League xili ciyaareedkan waxaana xilli dambe ay xalay u dagaallantay barbarro ay la gashay Borussia Monchengladbach oo laba gool kaga horreysay balse daqiiqadihii 87aad iyo waqtigii dheeraadka ahaa ayay labada gool keeneen xiddigaha Los Blancos.
Ciyaartii hore ayaa sidan oo kale loogala hor maray saddex gool oo Shakhtar Donetsk ay ku hubsatay shabaqa uu waardiyaha ka ahaa Thibaut Courtois, has eyeeshee waxay xilli dambe keeneen laba gool oo ka badbaadin kari waayey inay guul-darro ka badbaadaan.
Group-ka ay Real Madrid ku jirto oo lagu tilmaamo mid jilicsan ayay haddana ku dhibaatoonayaan, waxaanay kaga jiraan kaalinta ugu hoosaysa iyadoo ay Shakhtar Donetsk leedahay afar dhibcood, halka Inter Milan iyo Borissia Monchegladbach ka haystaan min laba dhibcood, laakiin Real Madrid ay dhibic kaliya heshay.
Kaddib guushii El Clasico ee Sabtidii ay kusoo garaaceen Barcelona, Real Madrid ayaa la filayay inay kalsooni ku tegayso ciyaartan Monchengladbach oo ay guul soo heli doonto, laakiin laba gool ayuu Marcus Thuram ka dhaliyey, iyadoo ciyaartuna ahayd 2-0 illaa laga gaadhayay daqiiqaddii 87aad.
Karim Benzema ayaa daqiiqaddii 87aad dhaliyey goolka koowaad ee kooxdiisa kaddib markii uu kubbad madax ugu soo dhiibay Casemiro.
Waqtigii dheeraadka ahaa ama daqiiqaddii 93aad ayay goolka barbarraha heshay Real Madrid, waxaana u dhaliyey Casemiro oo isagana kubbada uu madax ugu soo dhiibay Sergio Ramos.
Inkasta oo ay guul-darro ka badbaadeen, haddana waxa muuqatay in Real Madrid ay kala daadsanayd oo xiddigeeda ugu wanaagsan uu ahaa goolhaye Thibaut Courtois oo kubbado badan oo goolal caddaan ah noqon karayay ka badbaadiyey.
Waqtigii nasashada ee ciyaarta, ayay kaamirooyinka garoonku qabteen Karim Benzema oo hadallo aan looga baranin ay kasoo yeedhayaan, waxaana uu laacib kooxda ah ku tilmaamay ‘inuu kasoo horjeedo’ oo uu kooxda kale u ciyaarayo, sidaas darteedna ay tahay inaan la siinin kubadda.
Benzema ayaa sida laga dheegtay muuqaalka ay soo gudbiyeen kaamirooyinka ku xidhnaa qolka labbisku, waxa uu isaga oo la hadlaya Ferland Mendy uu u sheegay in aanu mar dambe kubadda siinin Vinicius Jr oo uu ka cabanayay inuu kubbadaha khasaarinayey, isla markaana aanu waxtar lahayn.
Karim Benzema ayaa si toos ah ugu yidhi Mendy: “Aniga ila ciyaar. Nolosha hooyaday ayaan ku dhaartay, isagu (Vinicius) wuxuu u ciyaarayaa kuwa inaga soo horjeeda.”
Qaybta dambe ayay muuqatay in Mendy uu qaatay hadalka Benzema, isla markaana uu kubbadaha ka joojiyey Vinicius oo ay isku dhinac taagnaayeen iyadoo uu la raadsanayay Benzema iyo ciyaartoyda kale ee khadka dhexe.
Arrinta yaabka leh ayaa waxay tahay in Karim Benzema uu yahay ciyaartoy aan looga baranin arrimo noocan ah, isla markaana dul-qaad badan oo ciyaartoyda kooxdiisa si caqliyeysan wax ugu sheega.
Si kastaba, waa kan muuqaalka laga duubay Benzema iyo Mendy: